Free Sample ဟုတ်တယ်, but we not in charge in shipping fee.
Delivery Time အကြောင်း 20-25 days after deposit comfirmed
စက်ရုံသည်အဓိကအားဖြင့်အောက်ပါ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်
2.FOB နှင့် CIF သို့တင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်လေဆိပ်တင်ခြင်း
4.အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကုန်ပစ္စည်းများသည်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်အမေဇုံ FBA မှတင်ပို့ကူညီနိုင်သည် .
က: ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာကမ်းလှမ်းရန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်သင်ပြည်ပကုန်တင်ကိုထမ်းရမယ်.
က: ဟုတ်တယ်. ကျနော်တို့အကြောင်းကိုဒီလယ်ပြင်၌အထူးပြုပါပြီ 20 နှစ်များ.
3. မင်းစက်ရုံဘယ်မှာလဲ? ကျွန်တော်အဲဒီကိုဘယ်လိုသွားလည်လို့ရမလဲ?
က: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် Baiyun ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ကွမ်ကျိုးနှင့်လေဆိပ်အနီး.
က:15-30 ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်များ, detail delivery date should be decided according to production season and order quantity.
5. မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
က: MOQ သည်သင်၏ကွဲပြားသောအော်ဒါနှင့်ထုပ်ပိုးမှုအပေါ်အခြေခံသည်. အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
6. မင်းပိုက်ဆံဘယ်လိုရောင်းလဲ? Can you accept the rate be fixed during whole order if not RMB?
က: ကျနော်တို့ RMB အားဖြင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်နေပါတယ် / ယူအက်စ်ဒီ / ဟောင်ကောင် / EURO / ပေါင်.
ဟုတ်တယ်, နှုန်းအဆက်အသွယ်အားဖြင့်တပြင်လုံးကိုအမိန့်ကာလအတွင်း fixed နိုင်ပါသည်.
က: ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုအမြဲတမ်းကိုးကားရန်အမြဲကြိုးစားနေသည်, but sometimes it depend on your quantity.
သင့်ရဲ့အသေးစိတ်တောင်းဆိုမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ပါ! သငျသညျအခမဲ့နမူနာလိုလျှင်, PLS ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့ပါ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：ရနံ့ကုထုံး & ရိဒ်ပျံ့